VAKY BANTSILANA : Miakatrakatra ny hafanana… | NewsMada
VAKY BANTSILANA : Miakatrakatra ny hafanana…
Par Freenews sur 21/05/2017
Na ao anatin’ny vanim-potoan’ny ririnina aza isika izao, ny azo ambara, miakatrakatrany toe-draharaham-pirenena amin’izao fotoana izao. Nampiakatra ny hafanana amin’ny toe-draharaham-pirenena ny avy amin’ny Sendikàn’ny mpitsara eto Madagasikara momba ny fampiharana ny tany tan-dalàna. Nambaran’ny SMM fa helohin’izy ireo amin’ny fomba rehetra ny fanohintohinana ny fizotran’ny fitsarana na amin’ireo mpitsara mampihatra ny asany araka ny lalàna. Mibaribary tokoa ny fitsabahan’ny fahefana mpanatanteraka amin’ny andraikitra tanterahin’ny fitsarana…
Anisan’ny tsy levon’ny vavonin’ny Sendikàn’ny mpitsara ny fandrangarangan’ny avy eo amin’ny mpanatanteraka, tamin’ny alalan’ny filoha nasionalin’ny HVM, momba ny fanehoan-keviny teo anivon’ny haino aman-jery samihafa mahakasika ny fandrangarangana fitoriana ireo mpitsara manao ny asany amin’ny « Raharaha Razaimamonjy ». Misy hatrany ny ravina manakom-positra ? Milaza anefa, ny avy eo amin’ny fitondrana fa tsy mitsabaka amin’io Raharaha Razaimamonjy io. Aleo ny vahoaka no hitsara raha tsy mitsabaka ny sasany fa mangarom-bilany mihitsy ? Anisan’ny mampiakatra ny hafanana amin’ny fampiharana ny tany tan-dalàna izany.
Mampiakatra koa ny hafanana teny anivon’ny Anjerimanontolo Ankatso teny. Fitakiana maromaro no notanterahin’izy ireo saingy, tsy nahitam-baliny mazava. Vokany, raikitra ny fidinana an-dalambe, izay niafara hatramin’ny fanapoahana lakrimozenina. Nambaran’ny filohan’ny mpianatra iray teny amin’ny Oniversite eny Ankatso, fa tsy afa-kiatrehana ny rafitra LMD ny resaka “internet”, izay mbola nandoavan’ny mpianatra vola, kanefa tsy misy akory. Volosana velona amina fitakiam-bola isan-karazany ny mpianatra. Ny vidim-piainana, miakatra efa ho isam-bolana, ny fampitaovana anefa, volan-kakafotra, omaly tsy miova hatrany.
Namelona lakolosy tsy an-kiato ny avy amin’ny fiombonamben’ny Eveka noho ny tsy fanarahan-dalana miseholany etsy sy eroa. Nahazo ny anjarany ny avy amin’ny minisiteran’ny Fahasalamana, ny avy amin’ny minisiteran’ny fanabeazana, ny mpiandraikitra ny fandriampahalemana sy ny fiarovam-pirenena, ny minisiteran’ny Harena an-kibon’ny tany sy ny angovo, ary indrindra ny minisiteran’ny Fitsarana. Efa tsy fanairana intsony no notanterahin’izy ireo fa fiovam-penitra mahery vaika. Nambaran’izy ireo fa difotry ny lainga sy fitaka ny fiainam-bahoaka ka tsy hita re intsony ny feon’ny olo-marina. Ny vola no lasa andriamanitra kely tompoina hatrany amin’ny faratampony. Tsy misy intsony ve ny manam-panahy sa maty eritreritra avokoa matoa manjaka ny ratsy sy tsy fitsinjovana ny soa iombonana, izay mahatonga ny toe-draharaham-pirenena hiakatrakatra toa izao…